Sawirro: Maxaa ka soo baxay kulankii Gudoonka Barlamanka iyo Gudiga dorooshada? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sawirro: Maxaa ka soo baxay kulankii Gudoonka Barlamanka iyo Gudiga dorooshada?
January 15, 2017 January 15, 2017 admin286
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), Guddoomiye ku xigeenka koowaad Mudane C/weli Sheekh Ibraahim Muudeey, Guddoomiye ku xigeenka labaad Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo uu wehliyo Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) ayaa maanta kormeeray xarunta guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer Federaal ayagoo guddiga kala hadlay dhameystirka doorashooyinka.
Arrimihii ay ka wadahadleen mas’uuliyiintan ayaa waxaa ka mid ahaa xaaladda doorashada iyo dhameystirka xubnaha kuraasta harsan ee Aqalka Hoose.
Guddiga doorashooyinka heer federaal oo uu hoggaaminayo Abuukaate Cumar Maxamud cabdulle ayaa guddoonka baarlamaanka u faahfaahiyay halka ay mareyso doorashada iyo sida loo dhameystirayo doorashada oo la sheegay in ay ka harsan yihiin 9 xubnood aqalka hoose ah iyo 5 aqalka sare ah., waxaa kaloo lagu heshiiyay in qaab kale loo maareeyo 5 kursi ee lagu muransanaa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Avv Cumar Dhagay ayaa ku wareejiyay guddoomiyaha Golaha Shacabka Avv Maxamed Cismaan Jawaari galal oo ay ku jiraan doorashada Xildhibaan-ka CV-giisa, Lacagihii laga qaadey, sida ID loogu sameeyay iyo wax walbo oo xildhibaanka ku saabsan si loo geliyo arkeefiyada baarlamaanka Soomaaliya.
Arrimihii ugu muhiimsanaa ee ay labada dhinac ka wadahadleen ayaa waxaa kamid ahaa;-
In haddii Xildhibaan labada aqal midkood ka tirsan uu geeriyoodo ama si kale kursiga u banneeyo uu badalkiisa ku yimaado qaabkii ay doorashadiisa u dhacday iyo goobtii lagu soo doortey.
In haweeney haddii kursiga ay baneyso lagu bedali karo haween kale.
Henrikh Mkhitaryan Oo Ku Dhawaaday Inuu Ku Biiro Liverpool Laakiin Waxaa Ka Hor Istaagay Jurgen Klopp